Izmit Bay ညစ်ညမ်းမှု 10 သင်္ဘော 10 Million TL ပြစ်ဒဏ်! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[05 / 11 / 2019] 2021 တွင် Ankara Bursa Bandırmaအမြန်ရထားကိုစတင်မည်	16 Bursa
[05 / 11 / 2019] Ekrem İmamoğlu'nu Emotional Minibus!	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[05 / 11 / 2019] Line 200 ကိုသုံးသောသူတို့အား ospel ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက် Kocaelikart စက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[05 / 11 / 2019] မြို့တော်ဝန်Büyükakınသည် Tram Line တွင်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်	41 Kocaeli
[05 / 11 / 2019] ဘူခါရက်စ်ရထား Durmazlar ဝမ်	16 Bursa
[05 / 11 / 2019] Pacific Eurasia သည်အရှေ့ဖျားနှင့်ဥရောပကိုသံပိုးဖြင့်သယ်ဆောင်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[05 / 11 / 2019] ESO R & D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစီမံကိန်းစျေးကွက် 2020 ပွဲ	26 Eskisehir
[05 / 11 / 2019] Bozankaya ရိုမေးနီးယားတွင်ဒုတိယအကြိမ်တင်ထားသည့်တင်ဒါရရှိခဲ့သည်	06 တူရကီ
[05 / 11 / 2019] Bursalılarအမြန်ရထားရထားချင်တယ်	16 Bursa
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliIzmit Bay ညစ်ညမ်းမှု 10 သင်္ဘော 10 Million TL ပြစ်ဒဏ်!
korfezi သည် TL ၏ဒဏ်ငွေသန်းကိုညစ်ညမ်းစေခဲ့သည်
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ဌာနပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်အတွက်ညစ်ညမ်းမှုမှ passage မပေးခဲ့ပါဘူး။7အဖွဲ့များသည်နေ့ရောညပါ 24 နာရီကိုပြောခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ပြီး 2019 ၏ 10 ဖြစ်ရပ်တွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သည်။ 10 သန်း9ထောင်ပေါင်း 884 TL အုပ်ချုပ်ရေးဒဏ်ငွေ 339 သင်္ဘောပေါ်တွင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များနှင့် Izmit ပင်လယ်ကွေ့ရှိသင်္ဘောများနှင့်အခြားသင်္ဘောများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုများအားအနီးကပ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
ပင်လယ်ပြင်လေကြောင်း၊ မြေနှင့်ပင်လယ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ပင်လယ်ရေကိုညစ်ညမ်းစေသည့်သင်္ဘောများနှင့်သင်္ဘောများမှပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Kozaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၊ ပင်လယ်ထိန်းချုပ်ရေးလေယာဉ်များပါသောလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များဖြစ်သော Izmit ပင်လယ်ကွေ့သည်သင်္ဘောများအားညစ်ညမ်းစေသည့်အိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ 2019 ၏ 10 လတွင်စုစုပေါင်း 10 သန်း9ထောင်ပေါင်းများစွာ TL အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုအား 884 သင်္ဘောတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဖြတ်ပြစ်မှု2သန်း 571 ထောင်ပေါင်းများစွာ TL
မကြာသေးမီက Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန၏စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကစစ်ဆေးခြင်းတွင် Ro-Ro ကုန်တင်သင်္ဘောအား ept Neptune İthaki en အမည်ရှိသောပင်လယ်သည်ညစ်ညမ်းနေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ သောကြာနေ့က Ford ဆိပ်ကမ်းရှိ Neptune akithaki bulunan ကုန်တင်သင်္ဘော bulunan Neptune akithaki bulunan ကိုရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့်အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုကြောင့် 11 သန်း2ထောင်ပေါင်း 517 TL အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကိုသောကြာနေ့က Ford Port မှာပြသခဲ့တယ်။
Izmit Bay ပင်လယ်ရေအရည်အသွေးကိုလည်း Metropolitan မြူနီစီပယ်ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သည်။ ပင်လယ်ရေ၏အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့ရှိပင်လယ်သတ္တဝါများ၏လူ ဦး ရေတိုးမြှင့်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ၏နယ်ပယ်အတွင်း, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်ရေအရည်အသွေးနှင့်မြေယာသွင်းအားစုများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအကြံပြုချက်များတိုးတက်အောင် "TUBITAK-MAM နှင့်ပူးပေါင်း။ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို6အဏ္ဏဝါဘူတာတွင်တစ်နှစ်ခန့်ရာသီအလိုက်နက်ရှိုင်းမှု (4 ကြိမ်) တွင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ပင်လယ်ကွေ့သို့စွန့်ပစ်သော 8 ချောင်းမှနမူနာများကိုယူပြီးတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်သည်။
Izmit ပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသောသင်္ဘောအတွက်ပြစ်ဒဏ်စံချိန်တင် 10 / 10 / 2019 Kocaeli Metropolitan Municipality မှ Izmit Bay အားကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏အစီရင်ခံစာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းက Izmit Cook Islandd Banda ခြောက်သွေ့သောကုန်တင်သင်္ဘောမှစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အသိပေးချက်…
12 459 န်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသန်းပြစ်ဒဏ်သင်္ဘော Kocaeli ပင်လယ်ကွေ့တွင် 15,5 တစ်နှစ် 23 / 12 / 2018 Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ဌာနပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိညစ်ညမ်းမှုကိုမလွန်။7ရက် 24 နာရီများသည်အသင်းများဟုပြောစရာမလိုပဲ၊ 2018 အဖြစ်အပျက်တွင် 10 အဖြစ်အပျက်အတွက်နာရီအလုပ်လုပ်သည်။
IMM ပင်လယ်ပြင်သန်းတစ်ထောင်န်းကျင်ညစ်ညမ်းစေ 875700 တစ်စီးဖြတ်အပြစ်ဒဏ် 12 / 03 / 2019 အိုင်စတန်တန် Metropolitan မြူနီစီပယ်ပင်လယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပင်လယ်သတ္တဝါများ၏လူနေမှုနေရာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ညစ်ညမ်းမှုစေသူတွေကိုအဘို့မျက်စိမထားဘူး။ IMM; လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်များအတွင်းအစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေနံထွက်ရှိသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊
Antalya 799 တထောင် Lira ပြစ်မှုဆိုင်ရာသင်္ဘောများညစ်ညမ်း 23 / 01 / 2019 ပတ် ၀ န်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာန၏ Antalya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၊ ပနားမားမှသယ်ဆောင်လာသည့်သင်္ဘော 799 ထောင်ပေါင်း 95 ပေါင်ကြောင့်ပင်လယ်ညစ်ညမ်းမှုဒဏ်ကိုကောင်းစွာခံစားခဲ့ရသည်။ Antalya Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထိန်းချုပ်ရေး ...
ဒဏ်ငွေပင်လယ်ကွေ့ 2016 တထောင်၏ TL ညစ်ညမ်းသင်္ဘောများဆန့်ကျင် 884 520 အတွက် 16 / 01 / 2017 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးနယ်ပယ်အတွင်းရှိ Kontrol ဆိပ်ကမ်းထိန်းချုပ်ရေး - 2016၊ နှင့် Reis Bey kapsamındaအမည်ရှိထိန်းချုပ်သည့်လှေများဖြင့် 884 - Kocaeli Metropolitan Municipality၊ 520 ထောင်ပေါင်းများစွာ 8 TL ပြစ်ဒဏ်အား XNUMX ရှိပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသောသင်္ဘောများပေါ်တွင်ချမှတ်ထားသည်။
Kocaseyit လေဆိပ်အတွက်5ဘတ်စ်ကား
မြို့တော်ဝန်Büyükakınသည် Tram Line တွင်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
Pacific Eurasia သည်အရှေ့ဖျားနှင့်ဥရောပကိုသံပိုးဖြင့်သယ်ဆောင်သည်
ESO R & D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစီမံကိန်းစျေးကွက် 2020 ပွဲ
Izmit ပင်လယ်ကွေ့ညစ်ညမ်းများအတွက်ပြစ်ဒဏ်များ၏ 14,5 သန်းတန်ဖိုးရှိ
Izmit ဂလားပင်လယ်အော်တံတား '' ပြီးအစီး xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (85) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (510) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Castrol Ford ကားရေးအဖွဲ့တူရကီတူရကီဆန္ဒပြချန်ပီယံရှစ် 2019 တံဆိပ်ခေါင်းပြီးရင်တော့